नेपाल आज | उमेर नपुग्दै के कारणले देखिन्छ बुढोपन?
उमेर नपुग्दै के कारणले देखिन्छ बुढोपन?
काठमाडौं । सामान्यतया बच्चाको छाला कोमल हुन्छ । उमेर वढ्दै जाँदा बिस्तारै छालामा रुखोपन र फिक्कामन आउन सुरु गर्छ । अझ बुढेसकाल लाग्दै गएपछि त छाला चाउरी पर्छ। जीर्ण हुँदै जान्छ। यो एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, कतिपय अबस्थामा उमेर नपुग्दै बुढ्यौली देखा पर्न थाल्छ। जसलाई चिकित्सकीय भाषामा एन्टी एजिङ समस्या भनिन्छ ।